10KA ADEEGAYAASHA DNS EE DADWEYNAHA UGU FIICAN 2022: ISBARBARDHIGGA & DIB U EEGISTA - JILICSAN
10ka Adeegayaasha DNS ee Dadweynaha ugu Fiican 2022: Isbarbardhigga & Dib u Eegista
La dhajiyayMarkii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Janaayo 2, 2022
Hagahan waxa uu ka doodi doonaa 10 ka ugu fiican ee adeega DNS dadweynaha ee bilaashka ah, oo ay ku jiraan Google, OpenDNS, Quad9, Cloudflare, CleanBrowsing, Comodo, Verisign, Alternate, iyo Level3.
Dunida dhijitaalka ah ee maanta, kama fikiri karno inaan ku bixino nolosheena internetka la'aanteed. DNS ama Nidaamka Magaca Domain waa erey caan ku ah intarneedka. Guud ahaan, waa nidaam ku habboon magacyada domain-ka sida Google.com ama Facebook.com iyo ciwaannada IP-ga ee saxda ah. Weli, ma helin waxay qabato? Aan u eegno sidan. Markaad gasho magac domain browserka, adeega DNS wuxuu u tarjumaa magacyadaas cinwaanno IP gaar ah oo kuu ogolaanaya inaad gasho bogaggan. Hel sida ay hadda muhiim u tahay?
Hadda, isla markaad ku xidho internetka, ISP-gaagu wuxuu ku meelayn doonaa server-yada DNS random. Si kastaba ha ahaatee, kuwani had iyo jeer maaha fursadaha ugu fiican ee la raaco. Sababta ka dambeysa tan ayaa ah in server-yada DNS ee gaabis ah ay sababi doonaan dib u dhac ka hor marka websaydhadu bilaabaan inay soo shubaan. Intaa waxaa dheer, laga yaabaa inaadan marin u helin bogagga sidoo kale.
Taasi waa halka ay ka soo galaan adeegyada guud ee DNS ee bilaashka ah. Markaad u beddesho server-ka DNS ee dadweynaha, waxay ka dhigi kartaa khibradaada mid aad u wanaagsan. Waxaad la kulmi doontaa arrimo farsamo oo aad uga yar iyadoo ay ugu wacan tahay 100% diiwaannada dheer ee wakhtiga iyo sidoo kale raadinta ka jawaabista badan. Ma aha taas oo keliya, serfaradan ayaa xannibaya gelitaanka goobaha cudurka qaba ama phishingka, taasoo ka dhigaysa waayo-aragnimadaada mid aad u ammaan badan. Intaa waxaa dheer, qaarkood xitaa waxay la yimaadaan sifooyin shaandhaynta nuxurka kuwaas oo ka caawinaya carruurtaada inay ka fogaadaan dhinacyada mugdiga ah ee internetka.
Hadda, waxaa jira xulashooyin badan marka ay timaado server-yada DNS ee dadweynaha ee ka jira internetka. Inkastoo tani ay wanaagsan tahay, waxay sidoo kale noqon kartaa mid xad dhaaf ah. Kee baa ku habboon in la doorto? Haddii ay dhacdo inaad isla yaabban tahay, waan kaa caawinayaa taas. Maqaalkan, waxaan kugula wadaagi doonaa 10 ka ugu wanaagsan server-yada DNS ee dadweynaha. Waxaad baran doontaa faahfaahin kasta oo ku saabsan iyaga si aad u samayso doorasho xog ogaal ah. Haddaba, annagoon wakhti kale lumin, aan sii wadno. Sii wad akhriska
10-ka Adeegayaasha DNS ee Dadweynaha ugu Fiican
#1. Adeegaha DNS Dadweynaha ee Google
#2. Fur DNS
#4. Norton ConnectSafe (adeeg mar dambe lama heli karo)
#8. Xaqiijinta DNS
#9. DNS kale
#10. Heerka 3
Marka hore, server-ka guud ee DNS aan kaala hadli doono waxaa loo yaqaan Adeegaha DNS Dadweynaha ee Google . Server-ka DNS waa mid bixiya suurtogalnimada ugu dhaqsiyaha badan dhammaan adeegayaasha DNS ee dadweynaha ee suuqa ka jira. Tiro badan oo isticmaaleyaal ah ayaa sii wada adeegsiga server-ka DNS ee dadweynaha, iyaga oo ku daraya qodobkiisa kalsoonida. Waxa kale oo ay la socotaa magaca astaanta Google. Markaad bilowdo inaad isticmaasho server-ka DNS ee dadweynaha, waxaad la kulmi doontaa waayo-aragnimo wax barasho oo aad u wanaagsan iyo sidoo kale heerar aad u sarreeya oo ammaan ah, taas oo ugu dambeyntii u horseedi doonta khibrad la yaab leh oo ku saabsan marin-biyoodka shabakadda.
Si aad u isticmaasho Google Public DNS Server, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa in aad ku habayso shabakadaha shabakadaha kombayutarkaaga ciwaanada IP-yada ee aan hoos ku soo sheegay:
DNS aasaasiga ah: 8.8.8.8
DNS-ka labaad: 8.8.4.4
Waana taas. Hadda waxaad diyaar u tahay inaad isticmaasho Google DNS Server-ka dadweynaha. Laakiin sug, sida dhabta ah loogu isticmaalo DNS-kan adiga Windows 10? Hagaag, ha werwerin, kaliya akhri hagahayaga sida loo beddelo goobaha DNS ee Windows 10 .
Adeegga DNS ee dadweynaha ee xiga ee aan ku tusi doono waa Fur DNS . Server-ka DNS waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo sidoo kale magacyada caanka ah ee DNS dadweynaha. Waxaa la aasaasay sanadkii 2005, waxaana hadda iska leh Cisco. Adeegaha DNS wuxuu ku yimaadaa qorshe ganacsi oo lacag la'aan iyo mid lacag ah labadaba.
Adeegga bilaashka ah ee uu bixiyo Server-ka DNS, waxaad heli doontaa astaamo badan oo la yaab leh sida 100% waqti-kordhin, xawaare sare, shaandhaynta nooca waalidka ikhtiyaariga ah si ilmahaagu aanu u dareemin dhinaca mugdiga ah ee shabakadda, iyo qaar kaloo badan. Intaa waxa dheer, Server-ku waxa kale oo uu xannibaa infekshanka iyo sidoo kale boggaga phishingka si kombayutarkaagu aanu dhibaato uga soo gaadhin wax malware ah oo xogtaada xasaasiga ah ay ahaanayso mid badbaado leh. Ma aha taas oo keliya, haddii ay dhacdo in ay jiraan arrimo in kasta oo ay tani jirto, waxaad had iyo jeer ka dhigi kartaa isticmaalka taageerada iimaylka ee bilaashka ah.
Dhanka kale, qorshayaasha ganacsi ee lacag bixinta ah waxay ku yimaadaan qaar ka mid ah sifooyin horumarsan sida awoodda lagu daawado taariikhdaada daalacashada ilaa sannadkii u dambeeyay. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale xiri kartaa nidaamkaaga adiga oo si fudud u oggolaanaya gelitaanka goobo gaar ah oo aad jeclaan lahayd oo aad xannibi karto kuwa kale. Hadda, dabcan, haddii aad tahay isticmaale dhexdhexaad ah, uma baahnid mid ka mid ah sifooyinkan. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay dhacdo inaad u malaynayso inaad jeclaan lahayd, waxaad ku heli kartaa iyaga oo bixinaya lacag ku dhow sannadkii.
Haddii aad tahay xirfadle ama aad waqti badan ku bixisay beddelashada DNS, waxay kuu noqon doontaa mid aad u fudud inaad isla markiiba si fudud u bilowdo adigoo dib u habayn ku samaynaya kombiyuutarkaaga si aad u isticmaasho adeegayaasha magaca OpenDNS. Dhanka kale, haddii aad tahay qof bilow ah ama aanad aqoon badan u lahayn tignoolajiyada, ha baqin saaxiib. OpenDNS waxa ay la socotaa buugag dejineed oo loogu talagalay kombuyuutarrada, Mac-yada, router-yada, aaladaha gacanta, iyo qaar kaloo badan.
DNS aasaasiga ah: 208.67.222.222
DNS-ka labaad: 208.67.220.220
Ma tahay qof raadinaya Server-ka guud ee DNS kaas oo ka ilaalin doona kombuyuutarkaaga iyo sidoo kale aaladaha kale khataraha internetka? Ha ka fogaan Quad9. Server-ka guud ee DNS wuxuu ilaaliyaa kombuyuutarkaaga isagoo si toos ah u xannibaya gelitaankaaga cudurka. phishing , iyo mareegaha aan badbaadada lahayn adoon u oggolaan inay kaydiyaan xogtaada gaarka ah iyo sidoo kale kuwa xasaasiga ah.
Qaabeynta aasaasiga ah ee DNS waa 9.9.9.9, halka qaabeynta looga baahan yahay DNS-ka sare waa 149.112.112.112. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Quad 9 IPv6 DNS Servers. Dejinta qaabeynta DNS-ka aasaasiga ah waa 9.9.9.9 halka dejinta dejinta ee DNS-ka sare ay tahay 149.112.112.112
Sida wax kasta oo kale oo adduunkan ka jira, Quad9 sidoo kale wuxuu la yimaadaa cilladihiisa gaarka ah. Iyadoo Server-ka guud ee DNS uu ilaalinayo kombiyuutarkaaga isagoo xannibaya goobaha waxyeellada leh, ma -markan - ma taageerto sifada shaandhaynta waxyaabaha ku jira. Quad9 sidoo kale waxay la socotaa IPV4 dadwaynaha DNS aan la hubin ee qaabeynta 9.9.9.10 .
DNS aasaasiga ah: 9.9.9.9
DNS-ka labaad: 149,112,112,112
Haddii aadan ku noolayn dhagax hoostiisa - oo aan hubo inaadan joogin - waxaad maqashay Norton. Shirkaddu kaliya ma bixiso antivirus iyo sidoo kale barnaamijyada la xiriira amniga internetka. Waxa intaa dheer in, waxa kale oo ay la socotaa adeegyada DNS Server dadweynaha ee loo yaqaan Norton ConnectSafe. Sifada gaarka ah ee Server-ka guud ee DNS Server-ku-salaysan ayaa ah inay kaa caawinayso inaad ka ilaaliso kombuyuutarkaaga shabakadaha phishingka.
Server-ka guud ee DNS wuxuu bixiyaa saddex siyaasadood oo shaandhaynta nuxurka horay loo sii qeexay. Saddexda siyaasadood ee shaandhaynta waa sida soo socota - Amniga, Nabadgelyada + Sawir-qaadista, Amniga + Sawirrada Galmada + Wax kale.
Server-ka soo socda ee DNS ee aan kaala hadli doono waxaa loo yaqaan Cloudflare. Server-ka guud ee DNS wuxuu caan ku yahay shabakada gudbinta nuxurka heerka sare ee ay bixiso. Server-ka guud ee DNS wuxuu la socdaa sifooyinka aasaasiga ah. Tijaabada madax banaan ee laga helay goobaha sida DNSPerf ayaa caddeeyey taas Cloudflare dhab ahaantii waa server-ka ugu dhaqsaha badan ee DNS ee ka jira intarneedka.
Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay in server-ka DNS ee dadweynaha uusan la imaanin adeegyada dheeraadka ah ee aad inta badan ku jiri doonto kuwa kale ee lagu xusay liiska. Ma heli doontid sifada ay ka midka yihiin xayeysiiska, shaandhaynta nuxurka, anti-phishing, ama mid ka mid ah hababka kuu ogolaanaya inaad la socoto ama maamusho nooca macluumaadka aad ka geli karto internetka iyo sidoo kale waxa aadan awoodin.
Qodob gaar ah oo ka mid ah server-ka DNS ee dadweynaha waa sirta ay bixiso. Kaliya uma isticmaasho xogtaada daalacashada si ay kuu tusto xayaysiisyada, laakiin sidoo kale waligeed kuma qorto ciwaanka IP-ga ee weydiinta, tusaale ahaan, ciwaanka IP-ga ee kombiyuutarkaaga saxanka. Diiwaanada la hayo ayaa lagu tirtiraa 24 saacadood gudahood. Kuwanuna maaha erayo keliya. Adeegga DNS ee dadwaynaha ayaa xisaabiya dhaqamadooda sanad walba iyadoo loo sii marayo KPMG oo ay la socoto soo saarista warbixin dadweyne. Sidaa darteed, waxaad hubin kartaa in shirkadu ay dhab ahaantii sameyso waxa ay sheegto.
The 1.1.1.1 Websaydhku waxa uu la socdaa hagitaan habayn yar oo ay weheliso casharro fudud oo la fahmi karo kuwaas oo daboolaya ku dhawaad ​​dhammaan nidaamyada hawlgalka sida Windows, Mac, Linux, Android, iOS, iyo router. Casharradu waa kuwo guud ahaan dabiiciga ah - waxaad heli doontaa tilmaamo isku mid ah nooc kasta oo Windows ah. Intaa waxaa dheer, haddii ay dhacdo in aad tahay isticmaale mobile, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa WARP taas oo hubinaysa in dhammaan taraafikada internetka ee telefoonkaaga la hubiyay.
DNS aasaasiga ah: 1.1.1.1
DNS-ka labaad: 1.0.0.1
Hadda, aan u jeedsano dareenkayaga server-ka DNS ee dadweynaha ee soo socda - CleanBrowsing . Waxay haysataa saddex ikhtiyaar oo bilaash ah oo Server-ka dadweynaha - shaandhada qaangaarka ah, shaandhada amniga, iyo filtarka qoyska. Server-yadan DNS waxa loo isticmaalaa sidii filtarrada amniga. Kuwa aasaasiga ah ee saddexda cusboonaysiinta saacad kasta ee xannibista phishing-ka iyo sidoo kale goobaha malware-ka. Habaynta habaynta ee DNS aasaasiga ah waa 185.228.168.9, halka habaynta habaynta DNS-ka sare uu yahay 185.228.169.9 .
IPV6 sidoo kale waxaa lagu taageeraa goobta qaabeynta 2aad:2aOO:1::2 DNS-ka aasaasiga ah halka habka qaabeynta ee DNS-ka sare 2aad:2aOO:2::2.
Shaandhaynta dadka waaweyn ee server DNS dadweynaha (habaynta habaynta 185.228.168.1 0) taas oo ka hortagaysa gelitaanka domains dadka waaweyn. Dhanka kale, shaandhada qoyska (habaynta habaynta 185.228.168.168 ) kuu ogolaanaya inaad xannibto VPN-yada , wakiilo, iyo nuxur dadka waaweyn oo isku dhafan. Qorshayaasha la bixiyay waxay leeyihiin astaamo badan oo kale sidoo kale.
DNS aasaasiga ah: 185.228.168.9
DNS-ka labaad: 185.228.169.9
Marka xigta, waxaan doonayaa inaan kaala hadlo Comodo Secure DNS . Adeegga DNS ee dadweynaha waa, guud ahaan, adeeg magac domain ah oo kaa caawinaya inaad ku xalliso codsiyada DNS Severs badan oo caalami ah. Natiijo ahaan, waxaad heli doontaa inaad la kulanto daalacashada internetka oo aad uga dhaqso badan kana wanaagsan marka aad isticmaalayso server-yada DNS-ka ah ee ISP-gaagu ay bixiso.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho Comodo Secure DNS, uma baahnid inaad rakibto wax software ama qalab ah. Dejinta qaabeynta ee aasaasiga ah iyo sidoo kale kan sare ee DNS waa sida soo socota:
DNS aasaasiga ah: 8.26.56.26
DNS-ka labaad: 8.20.247.20
Waxaa la aasaasay 1995. Verisign waxay bixisaa adeegyo badan sida dhowr adeegyo nabad-sugid, tusaale ahaan, DNS la maamulay. Adeegga DNS ee dadweynaha waxaa lagu bixiyaa bilaash. Saddexda astaamood ee ay shirkadu xoogga saarto ayaa ah amniga, sirta, iyo xasilloonida. Adeegga DNS ee dadwaynaha ayaa hubaal ah inuu si fiican uga shaqeeyo dhinacyadan. Shirkaddu waxay ku andacoonaysaa inaanay xogtaada ka iibinayn cid saddexaad.
Dhanka kale, wax qabadku wax yar ayaa ka maqan, gaar ahaan marka la barbar dhigo Server-yada kale ee DNS ee liiska ku jira. Si kastaba ha ahaatee, ma aha sidaas u xun sidoo kale. Adeegga DNS ee dadweynaha wuxuu kaa caawinayaa inaad dejiso DNS-kaaga dadweynaha casharrada lagu bixiyo shabakadooda. Waxay diyaar u yihiin Windows 7 iyo 10, Mac, mobilada, iyo Linux. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ka heli kartaa casharro ku saabsan habaynta goobaha server-ka ee routerkaaga.
DNS aasaasiga ah: 64.6.64.6
DNS-ka labaad: 64.6.65.6
Ma doonaysaa inaad hesho adeegaha DNS ee dadweynaha oo bilaash ah kaas oo xannibaya xayeysiisyada ka hor inta aanay gaadhin shabakadaada? Waxaan idiin soo bandhigayaa DNS kale . Server-ka guud ee DNS waxa uu wataa qorshayaal lacag-la'aan iyo sidoo kale lacag bixin ah labadaba. Qof kasta ayaa iska diiwaan gelin kara nooca bilaashka ah ee bogga isdiiwaangelinta. Intaa waxa dheer, ikhtiyaarka premium DNS ee qoyska ayaa xannibaya macluumaadka dadka waaweyn ee aad dooran karto adiga oo bixinaya lacag dhan .99 ​​bishii.
Dejinta qaabeynta DNS-ka aasaasiga ah waa 198.101.242.72, halka habaynta habaynta DNS-ka sare uu yahay 23.253.163.53 . Dhanka kale, DNS-ka kale wuxuu leeyahay IPv6 DNS servers sidoo kale. Dejinta qaabeynta DNS-ka aasaasiga ah waa 2001:4800:780e:510:a8cf:392e:ff04:8982 halka habaynta habaynta DNS-ka sare uu yahay 2001:4801:7825:103:be76:4eff:fe10:2e49.
DNS aasaasiga ah: 198.101.242.72
DNS-ka labaad: 23.253.163.53
Sidoo kale Akhri: Hagaaji server-ka DNS oo aan ka jawaabin khaladaadka gudaha Windows 10
Hadda, aan ka hadalno server-kii ugu dambeeyay ee DNS ee liiska - Level3. Server-ka guud ee DNS waxaa u shaqeeya Heerka 3 Isgaarsiinta waxaana lagu bixiyaa lacag la'aan. Habka loo dejiyo oo loo isticmaalo server-kan DNS waa mid aad u fudud. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa ku habeynta shabakadaha kombuyuutarkaaga adoo isticmaalaya cinwaanada IP-ga DNS ee hoos ku xusan:
DNS aasaasiga ah: 209.244.0.3
DNS-ka labaad: 208.244.0.4
Waa taas. Hadda waxaad diyaar u tahay inaad isticmaasho serfarka DNS ee dadweynaha.
Haddaba, nimanyahow, waxaan u nimid gabagabada maqaalka. Hadda waa waqtigii la soo koobi lahaa. Waxaan rajeynayaa in maqaalku uu ku siiyay qiimo aad loogu baahan yahay. Hadda oo aad haysato aqoonta lagama maarmaanka ah u isticmaal sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Haddii ay dhacdo in aad u malaynayso in aan wax tabayay ama haddii aad rabto in aan wax kale ka hadlo, ii soo sheeg. Ilaa wakhtiga xiga, daryeel oo nabad gelyo.
Elon waa qoraa tignoolajiyada Cyber ​​S. Waxa uu qorayay sida loo hago ilaa 6 sano hadda wuxuuna daboolay mowduucyo badan. Wuxuu jecel yahay inuu daboolo mowduucyada la xiriira Windows, Android, iyo tabaha iyo tabaha ugu dambeeyay.